Home Wararka Fahad Yasin oo amar ku bixiyay in shaqaalaha dowladda aanay mari karin...
Fahad Yasin oo amar ku bixiyay in shaqaalaha dowladda aanay mari karin wadada hormurta Madaxtooyada (Sababta)
Shaqaalaha rayidka ah ee Dowladda Soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyay culeys ka heesta marista waddada hormarta Madaxtooyada Soomaaliya kaas oo soo taagnaa mudo ka badan 30 cesho, sida ay Muqdish Online aay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay’adaha amniga
Shaqaalahaan ka tirsan Wasaaradaha Dowladda, Xafiisyada Baarlamaanka labada Gole, Dowladda Hoose, Maxkamadaha iyo Ciidamada ayaa sheegay in wixii maqribka ka dambeeyo loo sheegay in aysan mari karin wadadaasi laguna joojiyay amar ka soo baxay T/X NISA Fahad Yasin, base loo sheegay shaqaalaha dowladda in amarka ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya.
Maqribka kadib ayaa marista wadadaasi waxaa loo ogol-yahay kaliya Wasiirada, Baarlamaanka iyo Saraakiisha Sare ee Ciidamada Soomaaliya. T/X NISA Fahad Yaasin ayaa amar ku bixiyay in dhammaan shaqaalaha dowladda aanay mari karin wadada hor marta, isagoo sheegay in gaarigii ugu danbeeyay ee ku qarxay agagaarka guriga hooyooyinka ninkii waday uu wadada kusoo maray ID Card laga bixiyay xafiiska RW Kheyre.
“Aniga ayaa layga celiyay habeeno badan, barta Control ee Sayidka, iyo Ceel-gaabta, Ciidamadu waxay igu wargeliyeen in habeenkii wasaaradaha laga joojiyay marista wadadaan maxaa yeelay shaqo habeen ma jirto mana la ogola in halkaan la maro”, ayuu yiri mid kamid ah Shaqaalaha Dowladda oo la hadlay Muqdisho Online.
Sidoo kale waxaa la joojiyay dhamaan marista wadooyinka soo gala Madaxtooyada ee kala ah Dhabarka dambe ee Madaxtooyada ee 15 May, Caga Dhiig ama Shimbiraale iyo Wadada horumarta Godka Jilacow ee ka soo dhacda Taalada Daljirka Daahsoon.
Ciidamada koofiya casta ee ku sugan barahaas Control ayaa Muqdisho Online u sheegay gaari soo galaya ama ka baxaya aysan jirin 2 ka mid ah rugahaasi ciidan, halka mida kale kaliya laga bixi karo.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa hadda kaliya waxaa laga soo galaa kontaroolka Sayidka iyo Ceel-gaabta tan iyo wixii ka dambeeyay Qaraxyadii Madaxtooyada lagu soo weeraray Wasaaradaha amniga iyo Arimaha Gudaha. Markasta oo la wareero Villa Somalia waxaa la sii xiraa wadooyin kale oo markii hore si caadi ah loo mari jiray.
Ilaa hadda Madaxtooyada Soomaaliya kama hadlin arintaan, sidoo kale ma jirto wax faah faahin oo ay Dowladda Soomaaliya ka bixisay amarkaan lagu soo rogay wadada horumarta Madaxtooyada Soomaaliya. Shaqaalaha dowladda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in go’aankaan aysan ogayn Madaxda Soomaaliya, waxay ku baaqeen in dowladda Soomaaliya ay ka qaado amarka lagu soo rogay xiliyada habeenkii ah wadadaasi.